Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2010 |
Koseho izay tsy izy!
2010-10-04 @ 21:16 in Politika
Sambany, hono, eto Madagasikara no hampiasana vatom-pifidianana tokana. Raha amin'ny fifidianana sahanin'ny fanjakana tokoa dia mety ho marina izany fa raha resaka sendikaly na fifidianana delege any ampiasana kosa dia tsy marina velively izany fomba filaza izany. Fa raha dradraina ho fiovana lehibe izany zavatra izany toa tsy mba misy kosa ny fampianarana ny olona amin'ny fomba fanao amin'ny endri-batom-pifidianana tahaka itony? Tsy mbola nahita mihitsy aho aloha fa dokambarotra hampifidy ny eny kosa no nahitana fa asiana X izay safidiana. Olona mahiratra manaraka tsara no hahatsipalotra izany, ary amin'ny toerana takatr'ireny fahitalavitra ireny. Izany hoe tsy misy ny fanazavana ny sarambambem-bahoaka raha hanao ENY ny mpifidy iray ary tahaka ny ahoana kosa ny ataony amin'ny vatom-pifidianana raha hanao TSIA kosa izy. Ny mivandravandra aloha dia fampanaovana ny ENY irery ihany no atao. Misy olana goavana dia goavana iniana takonana ao ambadik'izany hampandresena amin'ny fomba rehetra ny ENY izany. Nahoana?
Raha amin'ny lojika mahazatra ny andavanandron'olona, indrindra fa ny eto amin'ny tanàna aloha, dia ny lahatsoratra na sary na voambolana tsy tiana no asiana izany X izany. Amin'ity fifidianana kasain'ny sasany hotontosaina amin'ny 17 novambra 2010 ity kosa dia izay safidiana no asiana X , izany hoe mifanohitra amin'ny mahazatra ny olona no atao ary ho hafahafa tanteraka aminy raha ny tiana indray no asiana io X io. Mazava loatra fa raha misy ny faritra atahorana hanao TSIA nefa tsy maharaka tsara ny tokony ataony amin'ny fanehoana izany safidiny izany fa mora dia mora ny mampandresy lahatra azy ireo fa "Koseho izay tsy izy". Rehefa kosehina anefa dia mahazatra ny olona ny manao azy hiendrika X. Izany dia ho an'ny olona tsy matahotra ny handray penina fa raiso kosa ny toeran'ny olona tsy mahay manoratra sy mamaky teny ary fadiranovana handray izany penina izany. Inona no hataony? Hanaonao foana sa tonga dia tsy handray anjara indrindra fa izy ihany no ho ao amin'ny efitra fitokanana vetivety. Averiko indray fa tsy misy mihitsy hatretony fanazavazavana amin'ny olona raha hanao TSIA izy ary ahoana kosa raha hanao ENY. Mbola tsy ho amin'izao fotoana izao izany biletà onìka izany.
Na dia noho ireo voalazako ireo fotsiny ihany aza dia nanova ny hevitro fa tsy mety ny hanatontosana ny fifidianana amin'io 17 novambra 2010 ho avy io ary raha azo atao aza dia sakanana amin'ny fomba rehetra izany satria fisolokiana ankitsirano ny safidin'ny Besinimaro. Ka raha sanatria sanatria tontosa ihany izy io dia tsy tsara velively ny mandray anjara ho amin'izany fifidianana izany. Tsy misy dikany fa toa mitovy ihany tsinona na ENY na TSIA no mandresy fa ry FAT ihany no hitondra koa ny vahaolana tsara indrindra dia ny tsy mampifidy sy tsy mifidy. Entano ny rehetra tsy hifidy satria fisolokiana io. Fa na izany na tsy izany dia araho maso hatrany ny lisitra ataon-dry zareo sao tsy ao ianao na misy olona hafa ampidiriny amin'ny fonenana misy anao. Marihina fa tany an-toeran-kafa aho dia efa nanatsidika kely ihany ny tokony hanaovana TSIA fa amin'izao fotoana izao dia mandrisika ny rehetra tsy hifidy amin'io fotoana io ary raha azo atao aza dia tadiavina ny fomba tsy hanatontosana io fifidianana kasaina atao tsy misy fanazavana io. Farany, oviana koa no misy mampiely trakitra arahina miaramila amina kamiao hiambina azy? Fampielezan-kevitra izany sa fampielezan-kery?
Jentilisa, 04 oktobra 2010 amin'ny 23:15